« Ndao hihira » : Tafita ny hafatr’i Mirado sy Tovo J’hay -
AccueilVaovao Samihafa« Ndao hihira » : Tafita ny hafatr’i Mirado sy Tovo J’hay
« Ndao hihira » : Tafita ny hafatr’i Mirado sy Tovo J’hay
Seho lehibe voalohany tamin’ity taona ity. Na tsy feno hipoka aza ny lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena tetsy Mahamasina, dia tafita ny hafatr’i Mirado sy Tovo J’hay tao anatin’ilay fampisehoana « Ndao hihira ». Ity ihany koa no fampisehoana voalohany nataon’i Mirado taorian’ny nandehanany tany ivelany. Efa ho enin-taona no tsy hita teto an-tanindrazana izy, ka nafana ny fifankahitana tamin’ireo mpankafy, izay saika tovovavy ny ankamaroany, ary horaka sy kikiaka hatrany no nandraisana ity mpanakanto ity sy ireo hira atolony. Na dia ilay hira vaovao « Tena tiako ianao », aza no nisantarany ny seho, tsapa avy hatrany ny fankafizan’ny mpijery ity mpanakanto ity. Nanakoako avy eo ireo hira efa nahafantarana azy toa ny « Eo anilanao », « Lasa », « soa fa nisy anao »…
Tao anatin’izay horakoraka izay ihany koa no nitsenan’ny mpijery an’i Tovo j’hay, izay nisantatra ny anjarany tamin’ny « Satry foana ». Nitondra tamberina kely ho an’ireo mpankafy azy ity mpanakanto ity, ka niverina kely tamin’ireo hirany tany amin’ny taona 2002 tany toa ny « ampitapitao », « Tsy misy toa anao »… Nahazo fankasitrahana ihany koa anefa ireo hira vaovao toa ny « angolanao »…
Nanome endrika hafa ny fampisehoana ny fandraisan’anjaran’i Tôsy sy Christian K. Nahavariana ny niarahan’izy ireo nikalo ny hira tambatra sangan’asan’i Tovo j’hay « Lazao azy ». Maro tamin’ireo ankizy ihany koa no variana tamin’ny talentan’i Christian K, izay namarana ny seho.
Notsikerain’ny SE.FA.FI tsy nanany indra fo avokoa ny fitondrana nifandimby teto nanomboka ny taona 2001 niorenany afa-tsy ny fitondrana H.A.T tamin’ny 2009. Iny fitondrana Tetezamita iny mantsy no endri-pitantanana nety indrindra ho an’ny SE.FA.FI ka ...Tohiny